မြစ်ဆုံ: လူသားတို. အင်္ဂါဂြိုဟ်အပေါ်ခြေချနိုင်တော.မည်
သိပ္ပံနည်းပညာ၏ တိုးတက်မှုကတော. အံမခန်းပင်ဖြစ်ပေတယ်။လူသားတို.၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို.ကလည်း တစ်ဖြေးဖြေးနှင်. ထိပ်ဆုံ:သို.ရောက်ရှိလာပေတော.သည်။ " တတ်နိုင်ဖျားရောက် " ဟုဆိုသည်.အတိုင်းလူသား တို.အောင်မြင်မှုသမိုင်းကတော. ချီးကျူးဖွယ်ရာဖြစ်လေတော.သည်။ မည်သို.ပင်ဖြစ်စေကာမှု လူသားတို.၏ အကျိူးကို ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို. ကြိုးစားနေကြသည်ဟု ပြောရမည်သာဖြစ်၏။
အင်္ဂါဂြိုဟ်လေ.လာရေး အာကာသယာဉ် (Mars 500) မှ အာကာသ ယဉ်မှူးများသည် ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသို. ရောက်ရှိခဲ.ပြီးနောက် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်သို. ဆင်း၍ လမ်းလျှောက်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အင်တက်နက်သတင်းတွေ မှာ ဖော်ပြခဲ.ပါတယ်။ ဇွန်လက လွှတ်တင်ခဲ.သည်. အဆိုပါ အာကာသယာဉ်အတွင်း ရုရှားနိုင်ငံသား သုံးဦး၊ ဥရောပ အာကာသယာဉ်မှူးနှစ်ဦး၊ တရုတ်နိုင်ငံသား တစ်ဦး စုစုပေါင်းခြောက်ဦး တို. လိုက်ပါသွားခဲ.သည်။ အဆိုပါ အာကာသယာဉ်၏ အာကာသယာဉ် မှူးများမှာ ရုရှားမှ စမိုလက်စကီး၊ ကာမိုင်လာနှင်. အလက်ဇေးဘီတက်ဗ် တို. ဖြစ်ပြီး ဥရောပမှ ဒီရိုအာဘီးနားနှင်.ရိုမိန်းချာလီတို. ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူးမှာတော. ဝမ်ယူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအာကာသယာဉ်မှူးများထည်းမှ သုံးဦးသည် လာမည်. ဖေဖေါ်ဝါရီ 14 ရက်တွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ မျက်နှာပြင်သို. ပထမဆုံးဆင်း၍ လမ်းလျှောက်ကြရန် စီစဉ်ထားပါသည်။အာကာသယာဉ် သည် ကမ္ဘာမြေမှ အင်္ဂါဂြိုဟ်သို. အသွား ရက် 250 ၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် လေ.လာမည်.ရက် 30 ၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်မှ ကမ္ဘာမြေသို.အပြန်ခရီး ရက် 240 ကြာမည်ဖြစ်ပြီး အားလုံးပေါင်းပါက ခရီးတစ်ခုလုးံသည် ရက် 520 ကြာမည်။ လူသားမျိုးဆက်သစ်များအတွက် ကိုလိုနီနယ်ပယ်များချဲ.ထွင်ရာတွင် အာကာသကို ပင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 13:57